ICT-Laboratory “ Internetworking and Routing on Microsoft Windows Platform ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြုလုပ်မည်
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (MCPA) သည် အသင်းသားများ၏ ICT ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လက်တွေ့လေ့လာမှုများအား အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်အတွက် လစဉ် LAB Schedule များရေးဆွဲ၍ လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးလျ... Read more
Apple Inc. ၏ Steve Jobs အတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်း သဝဏ်လွှာပေးပို.
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်နှင့် ကွန်ပျူတာအသင်းများမှ ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၅ရက်က ကွယ်လွန်သွားခဲ့သူ Apple Inc. ၏ ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Steve Jobs အတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်း သဝဏ်လွှာ ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။... Read more
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (MCPA) ၏ နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ် အသင်းသားစုံညီ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်မည်
ဲမြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (MCPA) ၏ နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ် အသင်းသားစုံညီ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲကို အောက်ဖော်ပြပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ကြွရောက်ပေးပါရန်... Read more
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း ရှင်သန်လာတော့မည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အီလက်ထရောနစ်စီးပွားရေး နှင့် IT အလုပ်အကိုင်များနှင့်ဆက်စပ်နေသော ITPEC စာမေးပွဲများ ဟောပြောပွဲများ ကျင်းပမည်
သတင်းအချက်အလက် နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ ပညာရှင်အသင်း (MCPA) မှ ကြီးမှုး၍ ICT နည်းပညာပြန့်ပွားရန်၊ ခေတ်မီနည်းပညာရပ်များ လေ့လာမှု နည်းလမ်းများ ဖော်ဆောင်ရန်... Read more
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ MCPA Newsletter ကို 2011 ခုနစ် အတွက် ထုတ်ဝေခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ၂၀၁၁ခုနှစ် အတွက် Newsletter ထွက်ရှိပြီ ဖြစ်သောကြောင့် MCPA အသင်းဝင်များ အားလုံး လာရောက် ထုတ်ယူ နိုင်ပါကြောင်း နှင်. မကြာမှီ အသင်းဝင် Member များ အနေနဲ. MCPA... Read more
ITPEC Executive Director Meeting In Manila
ဂျပန်နိုင်ငံ Information_Technology Promotion Agency (IPA) မှ ကြီးမှူး၍ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့တွင် စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်တွင် ဆွေးနွေးကျင်းပခဲ့သည့် ITPEC Executive Director Meeting သို့ မြန်မာန... Read more
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျုတာအသင်းချုပ်မှ ITPEC (FE) Exam Preparation ( Intensive Course ) သင်တန်းဖွင့်မည်။
၁/၁၀/၂၀၁၁ မှ ၂/၁၀ /၂၀၁၁ (စနေ၊တနင်္ဂနွေ)
၈ /၁၀/၂၀၁၁ မှ ၉ /၁၀ /၂၀၁၁ (စနေ၊တနင်္ဂနွေ)
၁၄/၁၀/၂၁၀၀ ( သောကြာ)
၁၅ /၁၀/၂၀၁၁ မှ ၁၆ /၁၀ /၂၀၁၁ (စနေ၊တနင်္ဂနွေ)
( ၇ ) ရက်... Read more
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချူပ် မှ ITPEC စာမေးပွဲများကျင်းပမည်
သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ် မှ ကြီးမှူး၍ Information Technology Professionals Examination Council (ITPEC) အသိအမှတ်ပြုစာမေးပွဲကို ကျ... Read more